Muhiimad intee le'eg ayuu u leeyahay sawirkaaga astaanta guud ee LinkedIn? | Martech Zone
Dhawr sano ka hor, waxaan ka qayb galay shir caalami ah waxayna lahaayeen xarun otomaatig ah oo aad sawiri karto oo aad ka heli karto dhowr xabbadood. Natiijadu waxay ahaayeen kuwo cajiib ah… sirdoonka kaamirada ayaa madaxaaga dhigay bartilmaameed, ka dib nalka ayaa si toos ah u hagaajiyay, oo kor u kacay… sawirada waa la qaaday. Waxaan dareemayay sida dang supermodel si fiican ayay u soo baxeen… isla markiiba waxaan ku dhejiyay profile kasta.
Laakiin may ahayn run ahaantii aniga. Anigu ma ihi model sare Waxaan ahay nin kaftan badan, miskiin ah, oo faraxsan oo jecel inuu dhoola cadeeyo, qoslo, oo uu dadka kale wax ka barto. Dhawr bilood ayaa iga soo wareegtay, waxaana la cashaynayey inantaydii iyo naag aan is naqaannay oo nala sheekaysanaysa. Gabadhaydu… oo aan u oggolaan karin xaalad kasta inay dhacdo iyada oo aan sawir la qaadin… ayaa sawir naga qaaday annaga oo qoslaya.
Waan jeclahay sawirkan Waxaan u baahday timo jaris, gadaalku wuxuu ahaa qoryo diirran, nalka ayaa soo dhawaynayay, waxaanan xidhanahay funaanad burgundy ah oo cad. Sawirkan is aniga. Markii aan guriga imid, waan gooyay oo aan dul saaray LinkedIn profile.
Fiiri oo ku xidh Douglas gudaha LinkedIn
Dabcan, ma ihi kaliya shaqaale ku jira LinkedIn. Waxaan ahay af-hayeen, qoraa, lataliye, iyo milkiile ganacsi. Todobaad ma socdo in aanan la xiriirin lamaane suurtagal ah, macmiil, ama shaqaale LinkedIn ah. Waxaan gabi ahaanba aan ku filnayn culayska ku filan sida ay muhiim u tahay sawirkaaga profile. Kahor intaanan kulmin, waxaan rabaa inaan ku arko, ku arko dhoola cadeyntaada, oo aan ku eego indhahaaga. Waxaan rabaa inaan dareemo inaad tahay saaxiib, xirfadle, oo aad tahay qof aad u wanaagsan oo lala xiriiriyo.
Taas ma ka heli karaa sawir? Dhammaantood maaha… laakiin waxaan heli karaa aragti koowaad!
Sawirka LinkedIn ma saameeyaa Shaqaalayntaada?
Adam Grucela Passport-Photo.online kaga jawaabay su'aashan muhiimka ah talooyin aad u wanaagsan oo leh tirokoobyo taageeraya xogtan. Xog-waraysigu waxa uu taabanayaa qaybo muhiim ah oo ka mid ah sawirka astaanta guud ee LinkedIn… oo ay ku jiraan sifooyinka sare:
heybad – Booqdaha ka dhig mid ku jecel oo ku aamino.
Mihnadda – Sawirka ku hagaaji meesha aad ku nooshahay.
Tayada – Soo rar kaliya sawirro si wanaagsan loo qaaday.
Personality – si fiican u baro iyaga.
Waxay bixiyaan talooyin qaar - sida shaqaaleysiinta sawir qaade xirfadle ah, iyadoo la isticmaalayo sawir tayo sare leh, hubi inay tahay xirfadle, adeegso muuqaal wanaagsan oo tuso soo jiidashadaada. waxay kaloo bixiyaan calamada cas:
Ha isticmaalin waji qayb ahaan muuqda.
Ha isticmaalin sawir yar
Ha isticmaalin sawirka fasaxa.
Ha isticmaalin sawir aan sax ahayn.
Ha u isticmaalin sawirka shirkadda mid shakhsi ah.
Ha noqonin mid aad u sarreeya marka aad caadi tahay.
Ha isticmaalin sawir dhoola cadeyn la'aan!
Xogta macluumaadka sidoo kale waxay ku tusaysaa in sawirkaagu aanu ahayn wax walba… hagaajinta guud ahaan astaantaada LinkedIn waxay muhiim u tahay kordhinta awoodaada isku xidhka iyo shaqaaleysiinta. Hubi inaad akhrido maqaalladayada kale iyo xog-ururinta la socota, oo ay ku jiraan tan hage faahfaahsan oo ku saabsan tayaynta astaantaada LinkedIn, iyo sidoo kale kuwan dheeraad ah Tilmaamaha profile LinkedIn.
Laakiin waan necbahay in aan sawiro
Waan helay laakiin sawirka profile kaaga waa ma adiga! Haddii aad neceb tahay helista iyo isticmaalka sawirada naftaada, waydii saaxiib wanaagsan oo aad ku kalsoon tahay. Ma jiraan wax la mid ah in la helo sawir qaade iyo saaxiib si ay kuu saaraan, qabtaan dhowr darsin darsin, ka dibna u oggolow saaxiibkaaga aad aaminsan tahay inuu doorto sawirka si uu u isticmaalo. Way ku garanayaan! Waxay ogaan doonaan midka runtii shaqo fiican ka qabta inuu ku matalo.
Tags: douglas karrinfographicLinkedInlinkin madaxlinkin sawirsawir kuxiranprofilein xiriir ahsawirsawirka profiletalooyinka sawirka profile